Jehovah Adasefo Eyiyɛ​—Ebɛn Kwan Do Na Wɔyɛ Ho Nhyehyɛɛ?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish French Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kachin Karen (S'gaw) Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mfantse Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tongan Turkish Turkmen Twi Ukrainian Urdu Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zulu
Jehovah Adasefo Bu Eyiyɛ Dɛn?
Yɛdze hɛn eyiyɛ ho nhyehyɛɛ nyina gyina Bible nkyerɛkyerɛ do, a dza odzidzi do yi kã ho:
Ntseasee wɔ mu dɛ obi bedzi no dɔfo no wu ho awerɛhow. Jesus n’esuafo no dzii hɔn adɔfo wu ho awerɛhow. (John 11:33-​35, 38; Ndwuma 8:2; 9:​39) Dɛm ntsi, yemmbu eyiyɛ dɛ ɔyɛ mber a yɛyɛ dede, yɛbɔ ndwom, na yɛgye hɛn enyi. (Ɔsɛnkafo 3:​1, 4; 7:​1-4) Mbom, yebu eyiyɛ dɛ ɔyɛ mber a yɛkyekye hɔn a adze atɔ hɔn enyi no werɛ.​—Romefo 12:15.
Ewufo nnyim biribiara. Nyimpa binom gye dzi dɛ ewufo da ho ara tse ase, na wobotum aboa anaa woepira atseasefo. Ɔmmfa ho ebusua a yefi mu anaa hɛn amambra no, yekwetsir amandze nye ndzeyɛɛ biara a ɔfoa dɛm gyedzi yi a ɔnye kyerɛwnsɛm no nnhyia no do. (Ɔsɛnkafo 9:​5, 6, 10) Dɛm amandze no bi nye epesi, eyi a wɔyɛ no hyerɛpɛɛ, eyiyɛ ho afrenhyiadzi, afɔr a wɔbɔ ma ewufo, ewufo a wobisa hɔn hɔ adze, nye kunayɛ ho amandze ahorow. Yekwetsir amandze nye ndzeyɛɛ a ɔtsetse dɛm nyina, osiandɛ yɛyɛ setsie ma Bible n’ahyɛdze a ɔnye dɛ: “Hom ntsew homho, . . . na mma hom nnkã efifidze.”​—2 Corinthfo 6:​17.
Yɛwɔ enyidado dɛ wobenyan ewufo. Bible no kyerɛkyerɛ dɛ owusoɛr bi bɛba, na mber bi bɛba a wobeyi owu efi hɔ. (Ndwuma 24:15; Nyikyerɛ 21:4) Dɛm enyidado yi ma yekwetsir dɛ yebedzi awerɛhow abor do, na dɛmara so na ɔboaa tsetse Christianfo no ma woenndzi awerɛhow ammbor do.​—1 Thessalonicafo 4:​13.
Bible no tu hɛn fo dɛ mma yɛnnyɛ adze nntra do. (Mbɛbusɛm 11:2) Yɛnngye nnto mu dɛ eyiyɛ yɛ ho kwan a wɔdze da “asetsena mu enyimnyampɛ” anaa ahonyadze a obi wɔ no edzi. (1 John 2:​16) Yɛnnyɛ eyi hyerɛpɛɛ a adwen nye dɛ yɛrebɛgye hɛn enyi. Dɛmara so na yɛmmfa efunndaka a no bo yɛ dzen dodoodow nnyɛ eyi, na yɛnnhyɛ ntar hyerɛpɛɛ a ɔbɛma bɔhwɛadzefo abɔ agye hɛn do.
Yɛmmfa hɛn gyedzi a yɛwɔ wɔ eyiyɛ ho no nnhyɛ afofor do. Iyi yɛ mu no, yedzi dɛm ngyinadosɛm yi do: “Hɛn nyina bobu hɛnankasa hɛnho akontaa nkorkor akyerɛ Nyankopɔn.” (Romefo 14:12) Naaso, sɛ wɔma hɛn ho kwan no a, yefi “ɔdwe nye [obu] mu” kyerɛkyerɛ hɛn gyedzi mu kyerɛ hɔn.​—1 Peter 3:​15.
Adasefo hɔn eyiyɛ tse dɛn?
Bea: Sɛ ebusua bi pɛ dɛ wɔyɛ eyi a, wobotum ayɛ wɔ beebiara a wɔpɛ, dɛ ɔyɛ Ahendzi Asa do, bea a wɔyɛ eyi, nyia oewu no ne fie, bea a wɔhyew fun, anaa esiei.
Eyiyɛ No: Wɔma ɔkasa a ɔkyerɛkyerɛ dza Bible no kã fa owu nye owusoɛr ho enyidado ho no mu dze kyekye hɔn a adze atɔ hɔn enyi no werɛ. (John 11:25; Romefo 5:​12; 2 Peter 3:​13) Eyiyɛ ho nhyehyɛɛ yi botum ama yeehu su pa a nna owufo no wɔ ber a ɔtse ase no, nye esuadze ahorow bi a ɔhyɛ nkuran a yebotum esũa efi no nhwɛdo pa no mu.​—2 Samuel 1:​17-​27.
Wɔtow ndwom a wɔdze Kyerɛwnsɛm no mu nsɛm ahyehyɛ. (Colossaefo 3:​16) Na wɔbɔ mpaa a ɔyɛ awerɛkyekyer dze eyiyɛ no ba ewiei.​—Philippifo 4:​6, 7.
Sika anaa kɔlɛhyɛn: Sɛ yɛreyɛ hɛn som mu dwumadzi biara, a eyiyɛ kã ho a, yɛnngyegye sika anaa kɔlɛhyɛn mmfi hɛn asafomba no hɔ. Dɛmara so na yɛnngyegye kɔlɛhyɛn wɔ hɛn ehyiadzi ahorow ase.​—Matthew 10:8.
Hɔn a wobotum aba bi: Hɔn a wɔnnyɛ Adasefo botum aba eyi a wɔyɛ wɔ Ahendzi Asa do no bi. Tse dɛ hɛn Christianfo nhyiamu ahorow no, obiara botum aba eyiyɛ a ɔtse dɛm no bi.
Aso Adasefo kɔ eyi a ɔsom afofor yɛ no bi?
Iyi yɛ mu no, Ɔdasefo biara gyina ne tsibowa a ɔdze Bible no atsetse no do si nankasa ne gyinae wɔ ho. (1 Timothy 1:​19) Naaso, yɛmmfa hɛnho nnhyɛ ɔsom mu ndzeyɛɛ ahorow a ɔnye Bible no nnhyia no mu.​—2 Corinthfo 6:​14-​17.